Posted on February 27, 2013 by Aung Thu Htet	ဆရာကြီး ကွန်ဖူးစိုးမြင့် ဘာသာပြန်သော လူတိုင်းအတွက် လျှပ်တစ်ပြက် ကိုယ်ခံပညာ စာအုပ် ဖြစ်သည်။
This entry was posted in Aikido, Judo, Karate, Kung Fu, Martial Arts, Martial Arts Book and tagged ကရာတေး, ကွန်ဖူး, ကွန်ဖူးစိုးမြင့်, ဂျူဒို, စာအုပ်, အာကီဒို by Aung Thu Htet. Bookmark the permalink.	6 thoughts on “လူတိုင်းအတွက် လျှပ်တစ်ပြက် ကိုယ်ခံပညာ (ကွန်ဖူးစိုးမြင့်)”	sarkalay on May 31, 2013 at 1:54 pm said:
Reply ↓	Aung Thu Htet on May 31, 2013 at 2:17 pm said:
Reply ↓	ယောစု on June 8, 2013 at 5:48 pm said:
Reply ↓	Pingback: သိုင်းစာအုပ်များ အလွယ်တကူ ၀ယ်နိုင်ပြီ… | Thaing Wizard